China AH Slurry Pump Rubber THROAT BUSH orinasa sy mpamatsy | YAAO
Ny slurry pump tenda bush dia iray amin'ireo faritra mando ao anaty paompy slurry marindrano izay mitarika ireo slurries mankany amin'ny impeller, izy io dia liner sisin-tsiranoka izay mifamatotra amin'ny takelaka fisaronana.
Ny lozam-boalavo dia mahazatra amin'ny paompy lehibe kokoa, satria ny lozabe sy ny volute liner dia matetika ao anaty singa matevina ao anaty paompy kely. Ny famolavolana kirihitrala slurry pump bush dia mifototra amin'ny vidiny mahomby amin'ny famokarana sy ny asa.
Mpampiasa sy mpivarotra maro no mampiasa ny teny hoe 'tenggoroka' miaraka amin'ny 'bush bush', tsipelina mahazatra sy eken'ny besinimaro izy io.
Ny lozam-bozaka voatavo slurry dia matetika vita amin'ny alika chrome avo na fingotra voajanahary, misy fitaovana manokana koa.
* Rafitra paompy slurry
* YAAO® pump bush bush dia tsy azo ovaina fotsiny miaraka amin'ny bushman pump pump bush.
Teo aloha: 8 taona mpanondrana slurry paompy miantra amin'ny takelaka fanakonana - L-Type Slurry Pump impeller - YAAO
Manaraka: Volo vita amin'ny paompy slurry